Shuruudaha iyo Xaaladaha - Alietc.com
FADLAN AKHRISO SHURUUDAHAyada iyo shuruudahayada. AMARKA IN LAGUU SAMEEYO DIIWAAN GELINTA IYO ISTICMAALKA Macaamiisha adeegyadeena WAA LOO BAAHAN YAHAY IN AY KU SAMEEYO XIRFADAHA.
Ku soo dhawow ALIETC! Hogaamiyaha adduunka ee ganacsiga elektaroonigga ah iyo ganacsiga. Shuruudahan iyo Shuruudahani waxay sharraxayaan xeerarka khuseeya marin u helkaaga iyo isticmaalka websaydhka, goobta mobilada iyo xariirka kale iyo webspace-ka ay ku shaqeeyaan oo ay iska leedahay ALIETC.com.
Codsashada iyo Ogolaanshaha Shuruudaha
Marka aad isqorto oo aad oggolaato shuruudaha adeegsiga waxaad ku qasban tahay shuruudaha iyo xaaladaha ku jira oo lagu sharxay dukumintigan iyo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. Adeegyadeena (oo ay ku jiraan adeegyada dalacsiinta iyo wax ka beddelid kumeelgaar ah ama wixii khasab ah) sidoo kale waxaa ka mid ah Liistada Top ama Liistada la kafaala qaaday iyo adeegyo kasta oo kale sida lagu shaacin karo ALIETC.com munaasabadda. Dukumintigaan iyo xeerarka kale iyo shuruucda kaleba waxaa si wada jir ah loogu gudbiyaa 'Shuruudaha'. Markii aad isdiiwaangeliso oo aad adeegsaneyso mid ka mid ah astaamaha iyo wax soo saarka boggaga, waxaad oggolaatay inaad aqbasho oo aad u shaqeyso si waafaqsan shuruudaha oo dhan.
Xannibaadaha Da'da: Helitaanka iyo adeegsiga adeegyada ALIETC.com, astaamaha iyo softiweeryada iyo badeecooyinka websaydhada ayaa si adag ugu xadidan dadka da'da sharciga ah iyo wixii ka sareeya. Da'daada sharciga ah waa in lagu dhawaaqo in ay la gasho qandaraasyo fulin leh adeegyadeena kuwa kuwa iska diiwaangeliya adeeggeena da 'sharciyeed looma oggola in lagu helo wax adeegyo ah sida ku xusan sharciga caalamiga ah, oo ay ku jiraan gobolka ama waddanka aad ku nooshahay, ama shaqeynaya ka. Qof kasta oo lagu helo inuu sheegto been abuur ku saabsan da'diisa sharciga ah wuxuu u qalmi doonaa ka saarista deg deg ah iyo xaddidaadda deg deg ah akoonkooda.
Waxyaabaha udhaxeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha: com waxay bixisaa aalado internetka oo elektiroonig ah oo isdhaafsiga, iibsashada iyo iibinta macluumaadka iyo macaamilada. Isticmaalayaashu waxay awoodaan inay maareeyaan, aqbalaan, dhigaan oo joojiyaan amarada iyo bixinta alaabada. ALIETC.com ma maamusho ama mas'uul kama aha ama waxay mas'uul ka tahay iibiyaasha ama awood iibsadaha inuu dhammaystiro iibsashada. Midkoodna ALIETC.com mas'uul kama ah badbaadada, sharci ahaanta, ama helitaanka badeecada ama adeegyadu isweydaarsadaan.
Wax ka Beddelka:com waxay sameyn karaan isbadal iyo wax ka badal shuruudahooda iyo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waqti kasta adoo ku dhajinaya isbadalada la xiriira iyo cusbooneysiinta ku saabsan Shuruudahooda Adeegga iyo macluumaadka Goobta. Markaad sii waddo helitaanka adeegga wakhtigaas ka dib, waxaad ku raacsan tahay macluumaadka wax laga beddelay iyo cusboonaysiinta. Dhammaan macluumaadka wax laga beddelo iyo la cusboonaysiiyay ayaa adiga lagu dabaqi doonaa mar haddii lagu daabaco Shuruudaha iyo Xaaladaha iyo Macluumaadka Goobta.
Xubnaha waa inay:
Samee nashaadaad adoo raacaya qawaaniinta goobta iyo sharciyada khuseeya
Ku sameyso macaamil ganacsi si niyad wanaag ah
Ha u isticmaalin goobta in lagu khayaaneeyo wax qof ah
Ha ku mashquulin Baxsad ama Farxad
Yaanay ku jirin naftooda howlaha ama qorshayaasha wax u dhimaya sumcadda xogta, nidaamyada ama shabakadaha ay adeegsato ALIETC.com
Ha ku darin fayraska kombiyuutarka ama barnaamijyada kale ee wax burburin kara
Ha ku lug yeelan wax dhaqdhaqaaq sharci darro ah, sida koobiyeynta, dib u daabacista ama ka faa iideysiga qayb kasta oo ka mid ah adeegyada ALIETC.com
Bixi macluumaad aqoonsi sax ah.